China 3D Yakadzika Embossed Isina kuvakwa Mvura WPC Hollow Decking vagadziri uye vanotengesa | Lihua
3D Yakadzama Embossed Isina mvura inoumbwa neWPC Hollow Decking
Zvigadzirwa Muridzi:WPC Kuburitsa
Mutengo:$ 2.35 / M
Ruvara:Marasha, maple shizha, Tsvuku huni, Kofi, nezvimwewo kana zvakagadziriswa
Lead nguva:10-18 MAZUVA
2.9m, 3.6mor yakagadziriswa
Kushambira Dziva, Paki, nezvimwe
● Nyowani nyowani 3D embossing WPC yekunze kushongedza pasi, yekushongedza yekuwedzera. 3D embossing tekinoroji inyanzvi yekuveza. Pasi rega rega rakaenzana nechivezwa, uye hunyanzvi mamiriro uye dhijitari yekuona yakagadziridzwa zvakanyanya. Classical 3D embossing ndiko kusimudzira kukuru mumatanda-epurasitiki anoonekwa, ayo asingakwanise kungonyorwazve nemabhandi asi zvakare kutsigira matanho ekutanga kuhukura.
● Yetsika wpc rinoumba decking zviri nyore kurasikirwa nezviyo pamusoro, super embossed decking inoita zvirinani kupfuura chero zvakajairika zvinoumbwa huni, zvinowanzoitika uye zvinokwezva, zvirinyore kupera uye kukwenya kusagadzikana.
● Kubwinya kwaLihua WPC decking uve nezvakanakira zvechivanhu rinoumba decking , ichiri kuchengetwa: isina mvura, inopesana neUV, inodziya mamiriro ekunze, inorwisa ngura, kudzivirira tupukanana, kuchengetedza kwakaderera, hupenyu hwakareba hwebasa nezvimwe ... Uye akadzika emabhodhi akadzika anotaridzika uye anzwe zvakanyanya kunge huni hwepanyama nekuda kweiyo 3D embossing kurapwa kwe pamusoro.
Slip Resistance Yakaoma EN 15534-1: 2014 Chikamu6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Pendulum kukosha≥36 Kutungamira kureba: Zvinoreva 56, Min 55
EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.4 Nzira yakatwasuka: Zvinoreva 73, Min 70
Kutedzemuka Nemishonga Wet EN 15534-1: 2014 Chikamu6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Pendulum kukosha≥36 Yekureba nzira: Inoreva 38, Min 36
EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.4 Nongedzo yakatwasuka: Zvinoreva 45, Min 43
Flexural zvivakwa EN15534-1: 2014 AnnexA -F'max: Zvinoreva -3300N, Min≥3000N Kukotama Simba: 27.4 MPa
EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.2 -Kufungisisa pasi pemutoro we500N Mean≤2.0mm, Max≤2.5mm Modulus yekusasarudzika: 3969 MPa
Kunonyanyisa mutoro: Zvinoreva 3786N, Min 3540N
Zvichireva: 0.86mm, Max: 0.99mm
Kuzvimba uye kutora mvura EN 15534-1: 2014 Chikamu8.3.1 Kureva Kuzvimba: ≤4% pakukora, -0.8% paupamhi, -0.4% pakureba Zvinoreva Kuzvimba: 1.81% pakukora, 0.22% paupamhi, 0.36% pakureba
EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.5 Max kuzvimba: ≤5% muukobvu, -1.2% paupamhi, -0.6% pakureba Max Kuzvimba: 2.36% muukobvu, 0.23% paupamhi, 0.44% pakureba
Kunwa mvura: Zvinoreva: 4.32%, Max: 5.06%
Zvichireva: ≤7%, Max: ≤9%
Kuramba kune induction EN 15534-1: 2014 Chikamu7.5 Brinell kuomarara: 79 MPa
EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.7 Chiyero cheelastic kupora: 65%
Pashure: Kurumidza kuendesa Kushongedza WPC Handrails - Kunze UV ​​Kuramba Isina Mvura WPC Kukwira Kutuka - Lihua
Zvadaro: 3D Mabhuku eBraille fireproof huni epurasitiki rinoumba WPC rusvingo cladding
Mabhodhi Kuisa Nongedzo download
Q1: Ndeipi dhizaini yekugadzirwa kwako kwechigadzirwa? Ndezvipi zvakanakira?
Q2: Ndeupi mutsauko wezvigadzirwa zvako pakati pevezera rako?
Q3: Ndivanaani vako veR & D vashandi? Ndezvipi zvinodiwa?
Q4: Chii chigadzirwa chako R & D zano?
Q5: Ndeapi ehunyanzvi magadzirirwo ezvigadzirwa zvako? Kana zvirizvo, ndeapi iwo chaiwo?
Q6: Ndeupi rudzi rwechitupa iwe wawakapasa?
Q7: Ndeupi rudzi rwechitupa iwe wawakapasa?
Q8: Ndeapi vatengi iwe wawaka pfuura pakuongorora kwefekitori?
Q9: Chii chako chekutenga sisitimu?
Q10: Ndeupi muyero wevatengesi vekambani yako?
rinoumba mhango WPC decking
Yakadzika Yakasanganiswa composite decking
Kunze kwehuni decking
Yakakura Embossed decking
3D Wood Deep Grain Mabhuku eBraille Wood hwoupenyu Soli ...
WPC rinoumba decking, WPC yekunze decking, huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC uriri, Kunze WPC decking, WPC decking uriri,